Alshabaab oo sheegatay Weerar lagu qaaday xildhibaan Kenyan ah iyo Askar lagu... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo sheegatay Weerar lagu qaaday xildhibaan Kenyan ah iyo Askar lagu... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helaya weerar ka dhacay duleedka magaalada Garisa, Waqooyi Bari Kenya, kaaso ay sheegatay kooxda Alshabaab ee ka howlgasha gudaha dalka Kenya.
Ugu yaraan shan askari oo ka tirsan booliska qeybta Difaaca Kaabayaasha Dhaqaalaha (Critical Infrastructure Protection Unit – CIPU) ayaa ku dhaawacmay qarax miino oo qabsaday Gaari ay la socdeen. xilli ay marayeen deegaanka Ijara ee ismaamulka Garissa.
Guddoomiye ku xigeenka ismaamulka Ijara Willy Cheboi ayaa sheegay in saraakiisha ay ku sii jeedeen Sangailu oo ka yimid Masalani markii uu qaraxu dhacay. “Saraakiishayadu waxay la kulmeen dhacdo qarax ah oo ka dhacay wadada Ijara Sangailu, dhammaan dhibanayaasha waa la soo badbaadiyay waxaana loo qaaday Manda Bay si loogu daweeyo,” ayuu Mr Cheboi.
Ciidamada la qarxiyey ayaa ilaalo ka ahaa Kolonyo saddex baabuur ah oo uu la socday xildhibaan katirsan baarlamaanka dalka Kenya oo lagu magacaabo Ibraahiim Cabaas.
Inta badan, IED-da waxaa maamula meel fog laga hago weeraryahan ku dhuumaalaysanaya duurka u dhow ama lagu dejiyay inuu ku qarxo wax kasta oo yar oo uu baabuur dul maro.
Saraakiisha ciidamada Kenya ayaa ka jawaabay falkaasi balse ma jirto cid loo soo qabtay falkaasi sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda.
Previous articleHaweeney la waayey oo Meydkeeda laga helay Goob aan la fileyn magaalada Baydhaba
Next articleDanjire Somali ah oo Fowdo ku tilmaamay howlaha ay Muqdisho ka wadaan Safiirada Carbeed iyo..